Limpheke ngobhojwana iphumalimi uSibiya – Ubukhosi
Home/ Ubukhosi noMhlaba/Limpheke ngobhojwana iphumalimi uSibiya
Limpheke ngobhojwana iphumalimi uSibiya
Ubukhosi News March 2, 2017
UMnu uMaveshe Sibiya ukhombisa ingxenye yendawo yakhe
Iphumalimi lithi kunezinswelaboya eMangethe kanti abantu bona bakhala ngeqola elibaqhwaga izindawo zabo
IKHEHLA laseMacambini eNyoni eNyakatho yeKwaZulu-Natal likhala ngebhoklolo lephumalimi lomlimi wenkampani kashukela ngokulihlalisa lubhojozi endaweni yalo.
Lokhu kulandela ngemuva kokuthi uMnu uMike Dunlop osebenzela inkampani uTongaat Huletts ecekele phansi umuzi wekhehla elinguMnu uMaveshe Sibiya ngoba ethi indawo sekungeyakhe usetshale kuyo umoba.
UDunlop okuthiwa wesatshiswa okwenyoka eMacambini kuthiwa uwuhlalise lubhojozi umphakathi waboHlanga okuthiwa uwuqhwaga izindawo zawo aziphendule amasimu akhe omoba. Kuthiwa uhlale ehamba nezinkabi ezesatshwayo endaweni. Uphethe uhlelo lwakwaTongaat Hulett olubizwa ngoSimamisa okwakuhloswe ngalo ukuzothuthukisa umphakathi woHlanga kwezolimo, kodwa manje okungasenzeki njengoba sekunguye ozihlomulisayo ngalo.
“Ophikisana naye umthumelela ngezinkabi ezikuthela isibhaxu noma zikubulale. Maningi amalungu omphakathi asedutshuliwe amanye abulawa ngenxa yalo mlungu okwakuthiwe uzosisiza ngokuzosiqeqesha kwezolimo. Ngikhuluma nje lo mlungu ungigijimisa izinkantolo ngendawo yami,” kusho uSibiya oneminyaka engama-69 ubudala nobonakala ukuthi akaphilile kahle. “Ngikhuluma nje ngoLwesibili ngiya enkantolo eMthunzini lapho engivulele khona icala lokuthi ngaphazamisa izisebenzi zakhe ezazizosebenza endaweni yami.”
Eyizeka indaba yosizi lwakhe uSibiya uthi inkinga iqale ngesikhathi kwedlula emhlabeni unkosikazi wakhe wesibili, onguNkk uLindiwe Sibiya, uMaNzama, owedlule emhlabeni eminyakeni emithathu eyedlule.
Lesi sithabathaba somuzi kaSibiya osubhodlozwe washiywa kusele izindonga nosuphenduke isidleke sezinyoni nezilwane zasendle ungasesontweni lamaRoma eMangethe.
“Nakhona futhi emzini wami wesibili ogudle ulwandle endaweni ebizwa ngokuthi kusoHwebede yena nezinkabi zakhe bayangihlukumeza. Futhi kunomunye ubaba ongumakhelwane wami wakwaGumede naye abamhlukumezayo ngoba bethi bafuna indawo ukuyisebenzisela ukutshala izimoba,” kuqhuba uSibiya.
“Ngithe ngibona lo mlungu wavele wangena endawo yami ngogandaganda ethi uzotshala umoba. Ngithe ngiyamyakhuza ngathelekelwa yizinkabi zakhe ezafike zangisongela ngokungiyisa kwagoqanyawo uma ngiqhubeka nokuvimbela ubasi wazo ekulimeni umoba,” kuqhuba uSibiya.
“Kwale noma sengimkhombisa amaphepha aqinisekisa ukuthi indawo ngeyami nokuthi ngayinikezwa iNkosi esanda kukhothama, uKhayelihle Mathaba wathi akanandaba nalaye nto yena uzolima ngenkani ngoba indawo sekungeyakhe.”
Uma wedlula emgwaqeni omkhulu uN2 eMacambini ukhangwa izintaba eziluhlaza ezigcwele izimoba ezizungeze ngisho imizi yabantu.
Uma ubuza kumalungu omphakathi avele akutshele ukuthi lawa ngamasimu kaDunlop awalime ngenkani. Amanye amalungu omphakathi okubalwa kuwo noMnu uSibusiso Dube akhala ngokuthi uDunlop usewaqedile ngisho namadlelo ezinkomo.
“Uma ekuqonela indawo yakho ukutshela ukuthi yena uzosebenzisa umhlaba wakho iminyaka emihlanu mahhala bese ekudedela ukuze nawe ulime. Nakuso leso sivumelwano akukho okubhalwa phansi kuphela ukutshela ngomlomo,” kusho uDube oseke wahlaselwa nguDunlop owayehambisana namadoda aboHlanga asatshwayo endaweni.
“Phela ngangimvimba ngoba esefuna ukudla indawo yasekhaya. Kwaba ngigadlile ngoba wavele watheleka nala madoda bezongisongela ngokungibulala. Impela abaphathi benkampani uTongaat Hulett basilethela isiqalekiso somlungu eMacambini. Siyahlukumezeka, asivikelwa muntu ngisho namaphoyisa ahambisana naye,” kuzikhalela uDude.
Namalungu eBhekamafa Community Trust (BCT) nawo akhala esifanayo mayelana nesihluku abathi senziwa nguDunlop emphakathini.
UMnu uZakhele Sithole ongomunye wabagilwa bakhe (uDunlop) uthi kumanje usexhwalile ngemuva kokulinyazwa ngomunye wezinkabi athi ngezikaDunlop.
USithole osebenza ukugada ihholo lakwaMasipala elingasenkantolo iMacambini Tribal Court, uthi uhlaselwe ephuma emsebenzini ngomunye wabasebenzi bakaDunlop ngenxa yokuthi ubengubhongoza ekulwisaneni noDunlop ekutheni apheze ukuqhwaga amalungu omphakathi izindawo zawo ngenkani.
IBAYEDE, ibe isinikela kuDunlop ukuyozitholela amaqiniso ngokushiwo ngaye, uDunlop uzuchithe njengampunge izinsolo ezibhekiswe kuyena.
“Konke lokhu abakushoyo ngami ngumbhedo. Empeleni uSibiya inkunzimalanga yesigebengu esihlukumeza umphakathi. Nguyena ohlale engesabisa njengoba sengize ngamvulela necala enkantolo eMthunzini,” kusho uDunlop.
“Empeleni akusiye yedwa uSibiya oyisigebengu kodwa kunamanye amalungu omphakathi afana naye. Kulabo kubalwa uMnu Prince Sibusiso Dube, uMnu Sibusiso Mndaba nabanye ozakwabo abahambisana nabo,” okhwele wadilika kuMnu Sibiya embiza nangesela eleba izimoba zabantu nempahla yomphakathi.
“Le nswelaboya enguSibiya ndini intshontsha izimoba zabantu. Untshontsha nezindawo zabantu aphinde asabise namalungu omphakathi,” kuqhuba uDunlop.
Ebuzwa ukuthi ngabe ungena kanjani ezindabeni zabantu kanye nale ndawo uSibiya athi ngeyakhe uthe yena usebenzela inkampani kaTongaat Huletts.
“Konke engikwenzayo ngikwenzela uHulett. Le ndawo uSibiya akhe kuyo umuzi wakhe yindawo yamaKhaladi ayidla ngenkani. Mina kule ndawo ngigadele amaKhaladi indawo yawo eyadliwa yilesi sigebengu esinguSibiya. Okunye futhi mina umphathi wami iNgonyama Trust. Ngisebenzela uMehluleli uJerome Ngwenya ngisho ungambuza,” kuqhuba uDunlop.
Ube esecela ukuba intatheli yeBAYEDE ihlele usuku lokuhlangana naye, izikhulu zakwaTongaat Hulett kanye namalungu omphakathi.
“Empeleni kade sasikufuna uMnu uZulu singakutholi. Besikufunela ukuthi sikwazi ukukukhombisa yonke imikhuba eyenziwa yila madoda endaweni,” kuqhuba uDunlop.
“Ngikhuluma nje la malungu eBhekamafa Communuty Trust okubalwa kuwo uMnu uSibusiso Mndaba bantshontshe imali yomphakathi ompofu eyizigidi ezingu-R1.9. Kumanje babhekene namacala eNkantolo eNkulu eThekwini. Ngikhuluma nje banyamalele nasendaweni ngoba bebabalekela ulaka lomphakathi obafuna uthuli.”
UDunlop uthe bona benenkampani yakwaTongaat Hulett baqashiselwe ngumphakathi izindawo ukuze balime umoba. “Ngakho thina silekelela lo mphakathi oxhashazwa yilezi zigebengu zamadoda. Namalungu omphakathi ayafisa ukuhlangana nawe ukuze akukhiphele wonke amaqiniso ngokuhlukumezeka kwabo okwenziwa yila madoda endaweni.”
UBukhosi bunqunu ngaphandle komhlaba-iSILO